Apply for Sale & Marketing. Female (1) (0Ks) in ရန်ကုန် on ipivi.com
Sale & Marketing. Female (1)
ရောင်းချသူ: အလုပ် ကြော်ငြာများ
လမ်းမတော်မြို့နယ်Junction မော်တင်အနီး (Travel & Tours Co.,ltd) မှခေါ်ယူခြင်းဖြစ်ပါသည်။ Sale & Marketing. Female (1) 😘 ကျောင်းကိစ္စကင်းရှင်း(or) ဘွဲ့တစ်ခုခု ရရှိပြီးသူ
😘 အသက် ၂၅နှစ် မှ ၂၈နှစ် အတွင်း
😘 Sale & Marketing ဖြင့် Exp(2)years
😘 Computer Basic, Excel ကျွမ်းကျင်ရပါမည်။
😘 English basic (or) English 4skills
အတွေ့အကြုံ ရှိသူဦးစား ပေးပါမည်။ #ကုမ္ပဏီအသေးစိတ်အချက်အလက်များ 🏡လမ်းမတော် မြို့နယ်တွင် အလုပ်ဆင်းရပါမည်။
⏰အလုပ်ချိန် 👉 8:45 am to5pm 👈
📆ပိတ်ရက် 👉 Sat+Sun+Guzz 👈
👚၁လပြည့်လျှင် ယူနီဖောင်း ပေးပါတယ်ခင်ဗျာ
💰 လစာ 💰 ၁၈၀,၀၀၀ မှ ၂ သိန်း+ Target ထိရင်
အခြားခံစားခွင့် ရှိပါသည်။ အထက်ပါအရည်အချင်း များနဲ့အဆင်ပြေကိုက်ညီပါက
ဦးစားပေး ခေါ်ပေးပါမည်။ 🏠 လူကိုယ်တိုင် လာရောက်လျှောက်ထားလိုပါက
(အမှတ်​၅ ၊၁ရုံ၊ပထမထပ်၊အင်းစိန်ဈေး) လမ်းညွှန် 👇
👉 အင်းစိန်ဈေး မှတ်တိုင်မှာဆင်းရပါမည်။ အထက်ပါလိပ်စာအတိုင်း ကျွန်တော်တို့အေဂျင်စီရုံးသို့
လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ....😘 ☎09 422662984 ☎ 09 768909204
☎09 969814691 ☎ 09 950961894 ရုံးချိန်(၉မှ၅)
နာရီအတွင်း အသေးစိတ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ 😘 moemyanmarjobhr@gmail.com (Email) လိပ်စာ
အတိုင်း အချိန်မရွေး CVဖောင်အား Word File ဖြင့်
ပို့ပေးထားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ.... 😘 Emailလည်းမသုံး လူကိုယ်တိုင်လည်းမလာနိုင်ပါက
Acc ၏ Messenger မှ လည်း CVဖောင်တင်ထားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ..😘 Online မှတင်ရင်တော့ ၃၊၄ရက်တော့စောင့်ပေးပါရန်
CVဖောင်အား ပြန်ရိုက်ပေးရခြင်းကြောင့် ခဏတော့
စောင့်ပေးပါရန်အနူးညွတ်တောင်းပန်ပါတယ်ခင်ဗျာ 😘 ကျွန်တော်တို့အေဂျင်စီရုံးသည် အလုပ်ချိန် (၉မှ၅)နာရီ
အမည်: Sale &amp; Marketing. Female (1)